Hooyo u waalatay Raadinta Wiil ay dhashay oo laga xaday+Sawirro - Awdinle Online
Hooyo u waalatay Raadinta Wiil ay dhashay oo laga xaday+Sawirro
Hooyo Fahmo Macalin Maxamed oo ku nool degmada Deeyniile ee Gobolkan Banaadir ayaa bilaawday inay isla hadasho, kaddib markii wiil ay dhashay ay muddo raadineysay ay weysay, isla markaana ay iska dhaadhicisay in la xaday.
Wiilka maqan oo lagu Magacaabo Cabdiraxmaan Shire ayaa da’diisa lagu sheegay 12 sano jir, waxaana lagu ogaa isaga oo ku maqan Dugsi Qur’aan balse uusan soo hoyan markii ugu dambeeysay.
Cabdullaahi Jimcaale oo abti u ah Wiilka la weeysan yahay ayaa sheegay in Hooyo Fahmo Macalin Maxamed ay muddo dhowr maalin ah raadis u gashay wiilkeeda, balse markii ay weeyday ay gashay inay isla hadasho oo ay dadka dhagxaan ku tuurto.
“ Wiilkeena wuxuu ahaay Wiil maskax leh oo Qur’aanka ku fiican waana 12 jir aan weligiis Guriga ka maqnaan, waana la yaabanahay, hadda waxaa ii qorsheysan in Hooyo Fahmo Macalin Maxamed aan geeyso Isbitaal ama meel lagu Qur’aan saaro ayuu yiri” Cabdullaahi Jimcaale.
Dhacdooyinka la xiriira Carruurta la xadayo ayaa maalmihii la soo dhaafay kusoo batay Magaalada Muqdisho iyo Gobolada dalka, iyada oo dowladda Soomaaliya oo dalka mas’uul ka ah ka aamusan tahay.
Previous articleSoomaali iibineysay waxyaabo dhacay oo lagu xiray dalla Koonfur Afrika
Next articleQaraxyo & dagaal toos ah oo ka dhacay Gobolka Hiiraan